‘विप्लव’को आधारक्षेत्र ५ नम्बर प्रदेश : ‘रोक्ने’ र ‘पड्काउने’ होडबाजी ! – PanchKhal Online
Home/समाचार/‘विप्लव’को आधारक्षेत्र ५ नम्बर प्रदेश : ‘रोक्ने’ र ‘पड्काउने’ होडबाजी !
बुटवल– सरकारले नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) समुहका गतिविधिमाथि प्रतिवन्ध लगाएको ६ महिना भएको छ । सो समुहलाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि कतिपयले मुलुकमा फेरि द्वन्द्वको खतरा भएको भन्दै सरकारको आलोचना पनि गरे ।
सरकारको यो निर्णयपछि कतिपयले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र नेत्र विक्रम चन्द (विप्लव) सँगै हिँडेको तस्वीर राखेर समाजिक सञ्जालमा टिकाटिप्पणी सुरु गरिए । जसमा गृहमन्त्रीको आचोलना बढि नै भयो । सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि प्रहरीले विप्लव समहुका नेताहरुको निगरानी, नियन्त्रण, र मुद्दा चलाउने कामहरु अहिलेसम्मै भइरहेका छन् । यो बीचमा कतिपय स्थानमा प्रहरीले विप्लव समुहका कार्यकर्तालाई गैरन्यायिक तरिकाले धरपडक र हत्यासम्म गरेको भन्दै सत्तापक्षका नेतादेखि प्रतिपक्ष समेतले सरकारको आलोचना गरे ।
प्रदेशमा ‘रोक्ने र पड्काउने’ क्रम रोकिएन
अब लागौँ विप्लव समहुको आधार ईलाका मानिने पाँच नम्बर प्रदेशतर्फ । जहाँ सत्ता पक्षका नेताहरु विप्लवका गतिविधिप्रति चर्को विरोध र नियन्त्रणको कुरा गरिरहेका छन् । अनि विप्लव समुह भने आफ्नो धन्दा ‘पड्काउने’ क्रमलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । अर्थात् सरकार विप्लवका गतिविधि रोक्न क्रियाशील छ भने विप्लव समुह आतंक फैलाउन सक्रिय छ । जसको मारमा कुनै न कुनै रुपमा नागरिक परिरहेका छन् ।
पत्रकार पुडासैनी मृत्यु प्रकरण : पोस्टमार्टम रिपोर्ट आयो, सिआइबीले खटायो अनुसन्धान टोली
हिरासतबाटै रवि लामिछानेले भने-प्रहरीसँग नै असुरक्षित महसुश गरेको छु